Velashape Muviri Contouring Fekitori | China Velashape Muviri Unogadzira Vagadziri uye Vatengesi
Ultrabox 6 MUNA 1 Cavitation RF Slimming Machine
Mushini unotora ultrasonic wave kuti ibudirire mhedzisiro inofungidzirwa yekubvisa mafuta, inova iyo Cavitation mhedzisiro. Nekushandisa yakachengeteka uye isinga-invasive mafuta-blasting zviito pane adipose tishu, muchina uyu unoratidza kufambira mberi kukuru kwetekinoroji uye kuvandudzwa nyowani kwenyika fatdissolving tekinoroji.
Iyo Cavitation RF inotsvedza muchina inogona kunyatsofefetera iyo Cellulite. Tichifunga nezve yakakwira frequency acoustic mafungu, inogadzira iyo Cavitationeffect kuputika iyo Cellulite, kuburikidza nekugadzira madiki madiki matema mukati memafuta maseru ayo anokonzeresa uye anoita kuti mafuta sero akanganisika,
nokudaro ichiburitsa zvese zvine mafuta mvura pasina kukuvadza chero nyama dzemuviri, senge mitsipa yeropa uye lymphatic system. Mushure meizvozvo, muviri unoziva maseru emafuta akakanganiswa uye zvinwiwa sehupfu uye wozoenda nekubvisa iwo kubva mumuviri kuburikidza ne lymphatic uye vascular masisitimu. Pamusoro pezvo, yedu Cavitation system, kwete chete inoputika iyo Cellulite, asi zvakare inomhanyisa kutenderera uye inonyatso kusimudzira metabolism. Chii zvakare, inogona kusimbisa ganda nemuviri, kumutsa mhasuru simba.
Zvichakadaro, chengetedza kutaridzika kwevechidiki. Yedu Cavitation sisitimu ine inomiririra muchina, ultrasonic wave kurapwa musoro chidimbu, Bipolar / Tripolar kurapwa musoro chidimbu uye zvimwe zvimwe zvikamu. Iyo inomiririra muchina unogadzirirwa ne8 inches LED Backlight Liquid crystal kuratidza uye kutanga makiyi LCD haisi yezve marongero chete, asi zvakare inoratidza paramende uye nguva dzekurapa.
Kuma Rakaumbwa Muviri Contouring Machine
Kuma Shape Muviri Contouring Chidimbu isynthetic kurapwa masisitimu ekuderedza mafuta ayo anosanganisa radio frequency, infrared mwenje uye vharumu uye mekutenderera roller massage, matekinoroji mana mune mumwe muchina.
Simba rinopisa rinorapwa nzvimbo, richisvika kumafuta ane mari pasi peganda. Masero emafuta ari kunyungudika panzvimbo yakarapwa panguva yekurapwa kuitira kuti uwane kudzikama kwemafuta.
Radio frequency (RF) ine ma rollers maviri anogona kupinda mukati mehupamhi hwe 0.5-1.5 cm pazasi peganda kuti ishande pane adipose tishu zvinobudirira.
Infrared mwenje inogona kupisa iyo inobatanidza matishu ekukurumidza kumutsidzira kumutsiridzwazve kwe collagen uye elastic fiber. Izvo zvinogona zvakare kugadzirisa kutenderera kweropa uye lymph kutenderera kusimudzira metabolism.
Chinogadziriswa chinosimudza chinogona kuyamwa nzvimbo yakanangwa munzvimbo ine pakati pematanha maviri ayo ari maviri maelekitirodhi. Izvi zvinogona kuita kurapwa nenzira kwayo uye zvinobudirira.
Iwo auto-rollers anokwizawo nzvimbo yakarapwa kuburitsa kuneta uye mhasuru maronda. Maitiro ese anodziya uye akasununguka kwazvo.
Mini Kuma Rakaumbwa Pro 5-In-1 Muviri Contouring Machine
Mini Kuma Shape Pro 5-In-1 Chidimbu chakanangana nekuumba muviri, kusimbisa uye kudzikisira mafuta.
a) Kuumbwa kwemuviri: Chinangwa ndechekugadzirisa muviri uchitarisa munzvimbo dzine dambudziko. Inopawo kuvandudzwa kwehutachiona hutachiona, lymphatic drainage, kukurudzira kwe collagen uye elastin.
b) Kuderedza Mafuta: Iyo yakaderedzwa kubva ku70 kusvika ku80% ye cellulite.
c) Reaffirmation: Nekuderedza kutaridzika kwecellulite uye nekupaza zvakasarudzika nzvimbo, ganda rinorasikirwa netoni uye rinoita kuremara zvishoma, mamiriro anopokana neiyi kurapwa.
Mini Kuma Shape Pro 5-In-1 Chishandiso chinotora matekinoroji mazhinji eCavitation, Radio Frequency, infrared Mwenje, Negative Pressure uye Mechanical Roller.
Kuma Shape Pro 5-In-1 Muviri Contouring Machine
Kuma Shape Pro Muviri Contouring Midziyo inoshanda pamwe nekubatanidzwa kwe5 tekinoroji: Radio Frequency, infrared Mwenje, Cavitation, Negative Pressure uye Mechanical Roller.
Iyo yekurapa inzira isinga pindire, iyo inoshandisa vharumu isina kumanikidza kumanikidza kusimudza iyo epidermis, derma uye subcutaneous mafuta, yozosunga uye kutambanudza iwo anobatana matishu muakasiyana kortex, ayo anogona kunyatsoputsa mafuta epasi pechisimba uye inosvina capillary mudziyo, uye inosimudzira metabolism yemasuru nekumhanyisa kana. Simba rinopisa nzvimbo yakarapwa inosvika panosvika 43º Celsius Degree, iyo inokonzeresa kuburitsa mafuta acids. Mafuta acids anonyungudutsa mafuta maseru ari munzvimbo yakarapwa panguva yekurapwa. Iwo akasemesa mafuta maseru anozobviswa kunze kwemuviri neyakajairwa metabolism kutenderera.
Kubudikidza nemhando dzakasiyana dzekurapa misoro, iyo inosanganisa matekinoroji mashanu, kurapwa kunoitwa, uko kunosanganisira nhevedzano yezvikamu zvishanu kusvika gumi munzvimbo dzinofanirwa kurapwa neinosvika maminetsi gumi nemashanu kusvika maawa maviri, zvinoenderana nenhamba yenzvimbo. .